I-Chateau encane - I-Airbnb
Ouagadougou, Centre, i-Burkina Faso
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Claude-Yvette
Indawo yethu yokuhlala itholakala endaweni ye-goose paste (isifunda esingumakhelwane e-Ouaga 200) umzila osuka etiyeleni obhekene nekhemisi laseCoura. Yakhiwe ngamakamelo okulala anomoya opholile angu-3 okuhlanganisa negumbi lokugezela elisegumbini elikhulu lokulala nelilodwa elisephasishi, igumbi lokuphumula elikhulu elinegumbi lokudlela igaraji elikwazi ukuthwala izimoto ezintathu. indawo yokuhlala inomshini wokuwasha.Ivikelekile, ithokomele futhi ifudumele futhi ilungele imindeni yonke kanye nabashadikazi abafuna izindawo ezinkulu.
I-Le Petit Château itholakala kulayini owodwa osuka kulayini owenziwe ngetshe, imizuzu emi-5 ukusuka ekhemisi lase-Coura kanye nemizuzu emi-3 ukusuka ezinyaweni zegwababa uzungeza amalungelo abantu.
I-Villa itholakala emhumeni ovela kulayini oboshwe; indawo izolile futhi ivikelekile. Nhlangothi zonke uzothola izindawo zokudlela eziningi nama-nightclub futhi uzokwazisa kalula ubuciko bokuphila be-Ouagalais.
Ngaphakathi kwe-villa unayo:
-Igumbi lokuhlala elikhulu elinomoya opholile
-Amakamelo okulala amathathu ane-air conditioner anawodilophu afakiwe
-Amakamelo okugezela amabili angasese okuhlanganisa negumbi lokulala elikhulu elinobhavu
- Igumbi lokudlela
- Ijubane eliphezulu WiFi
-50 intshi smart flat screen TV (Netflix, premium ividiyo)
- ukubhaliswa okuyisisekelo kweCanal +
- ikhishi elifakwe kahle (i-microwave, ihhavini, ifriji enkulu ye-inverter)
Igalaji elikhulu elingabamba izimoto ezifika kwezi-3 kanye nezindawo zokupaka zangaphandle.
Uma ufisa, sizokuhlinzeka ngezokuthutha zamahhala ukusuka esikhumulweni sezindiza ukuya endaweni yokuhlala lapho ufika kanye ngendawo yokuhlala esikhumulweni sezindiza lapho uhamba.
Uma ufuna ukuqasha imoto, sicela usazise kusengaphambili
NB: Ekufikeni kwakho sizobe sisevillage siyongena. Sibeka ugesi omncane wosuku futhi emva kukagesi (amandla emali) kungumthwalo wakho
Sihlala onakho amahora angu-24 ngosuku nganoma yisiphi isidingo.